Xuska Maalinta Caalamiga ah ee Deegaanka oo lagu qabtay Muqdisho – Wakaaladda Wararka Soomaaliyeed
Xuska Maalinta Caalamiga ah ee Deegaanka oo lagu qabtay Muqdisho
By Abdihakim Sharif Ali / June 10, 2019 June 10, 2019
Muqdisho (SONNA) Soo bandhigidda Dhibaatooyinka laga dhaxlo dikhowga hawada, xaalufinta dhirta iyo sida ugu haboon ee looga shaqeyn karo ilaalinta deegaanka ayey ku saabsaneyd munaasabadan oo lagu xusayey maalinta deegaanka oo dunida oo dhan looga dabaal dago.
Munaasabada oo ay soo qaban qaabiyeen Agaasinka bii’ada ee Xafiiska Ra’iisul wasaaraha ayaa waxaa ka qeyb galay Wasiirka Dekedaha, Aqoonyahano iyo Marti sharaf kale.
Axmed Yuusuf Axmed Agaasimaha Guud ee bii’ada ee Xafiiska Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa ku dheeraaday ka hadalka muhiimadda ay leedahay xuska maalinta deegaanka, isagoo dhinaca kale xusay in ay diyaariyeen sharciyo kala duwan oo looga hortagayo nabaad guurka iyo xaalufinta dhirta.
Agaasimaha guud ee Wasaradda Kaluumeysiga iyo Kheyraadka Badda Maxamuud Sheekh Cabdullahi ayaa xusay muhiimada ay leedahay ilaalinta deegaanka, Wuxuuna ku baaqay in la keeno sharci lagu ciqaabayo qof walba oo dhibaateeya deegaanka.
Wasiirka Dekedaha iyo Gaadiidka Badda XFS Marwo Maryan Aweys Jaamac oo munaasabadda soo xirtay ayaa sheegtay in bulshada looga baahan yahay in ay ka wada shaqeeyaan sidii looga hortagi lahaa dhibaateenta deegaanka oo laga dhaxlo abaaro iyo cuduro kala duwan .
Ugu dambeyn waxaa Munasabada Shahaadooyin la gudoonsiiyey shirkado iyo shaqsiyaad gacan ka geystay ilaalinta deegaanka, iyadoo dhinaca kale masuuliyiintu ay dhir beeris ka sameeyeen goobo kala duwan.
Madaxweynaha Galmudug oo sheegay in deegaanada Galmudug ay hub aruurin ka sameynayaan.
Xukuumadda Oo Billowday Fulinta Amarkii Ra’iisul Wasaaraha Ee Doorashada
Dowladda Federaalka oo Agab caafimaad geysay Degmada Garbahaareey+Sawirro
Safaaradda Soomaaliya ee Uganda oo Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku xayirnaa Dalka Uganda u fudeysay in dib dalka loogu celiyo
Dadka lagu arkayo caalamadaha Caronavirus oo kusoo badanayo Magaalooyinka Galmudug.